ULWAPHULO-MTHETHO LAWYER MEKO
ULWAPHULO-MTHETHO LAWYER USHISHINO
Oko ukwenza xa zolwaphulo mthetho meko.
Zolwaphulo mthetho meko, kwaye nje inkangeleko inzala Yakho umntu okanye ilungu losapho kunye komthetho rhoqo kukhokelela usamuel kwaye sleepless nights. Kodwa kule imeko animelanga ukuba despair kwaye kunika phezulu, kodwa kungcono ukuba urgently athabathe onke amanyathelo ukukhusela yolwaphulo-meko.
Kuqala kwaye foremost, qhagamshelana nathi kuba isemthethweni luhlomle kuwo kwindlela yakho, ulwaphulo-mthetho meko. Ukuba ezinzima umbuzo, isivumelwano kunye a lawyer urgently kufuneka conclude ekuqaleni kwethuba ka-iimali, ulwaphulo-mthetho iingxoxo.
A lawyer, ulwaphulo-mthetho uza utyelele Isebe Imicimbi yangaphakathi (okanye ezinye umzimba) abo ukhokela zolwaphulo mthetho uphando lwaso, kwaye siya kufumana yonke kuyimfuneko ulwazi.
Kunye Nawe thina bakhulise isemthethweni indawo nokuseka kwi yayo qho ngonyaka a nkqo ekukhuseleni ilungelo zolwaphulo mthetho meko. Kananjalo siza kukuxelela malunga ukulandelelana iimali, ulwaphulo-mthetho iingxoxo ngokunxulumene Yakho imeko, inkqubo ye-ukwenza umsebenzi investigative iintshukumo, urgent intshukumo kwindlela Yakho inxalenye kwaye ndiya kukuphendula Yenu yonke imibuzo.
Kufuneka ngoko nangoko, hayi ikuvumela izinto sishenxe kwi-ithemba ukuba yonke into izawuba kugqitywe Yakho ukuthandwa. Musa xana malunga amapolisa-manani kwaye»cane indlela,»phantsi apho investigator (investigator) ungalahlekelwa nethuba ukuba ingaba omnye, ulwaphulo-mthetho meko.
Imbuyekezo kwimeko dismissal isixhosa Inkcazelo Imizekelo Aph